Dawlada Soomaaliya oo Laga Cabsanayo in ay Dagaal Hor Leh Galiso Dalka – Rasaasa News
May 17, 2013 Somali Ogaden, Somaliland, Somaliya
Dadaal iyo miis xile ayey Dawlada Xasan Sheekh Maxmauud oo jirta 8 bilood oo kaliya ku dhalatay, waxayna garab marsantahay dastuurka dalka Somaliya, kaas oo ah in ay Somaliya tahay dawlada wadaag ah oo kulmisa maamulo dhawr ah.
Dagaalkii ka socday 22 sano ee dalka Somaliya waxaa uu ahaa dagaal qabiileed, waxaana ugu dambaytii aduunyadu ku xalisay in dalka laga dhiso maamulo ku salaysan qabiil iyo isfaham degaan, arintaas oo ay Somalidu raali ku noqotay wadana saxiixday.
Arinkaas oo ay dawladihii ku meel gaadhka ahaa ee dawlada haatan ka horeeyey kuligood ku wada dhaqmayeen, ugu dambayntiina dhalay dawladan rasmiga ah.
Dawlada maanta jirta, wax sababayba way ka hortimid qodobka dastuuriga ah ee dawlad wadaaga ah. Waxayna si cad isu hortaagtay dhismaha dawlad gabaleedyo ka dhasha dalka, iyada oo ka talo qaadanaysa dad wata arimo arimo hore looga gudbay oo ku salaysan isku dirka beelaha iyo cambaaraynta dalalkii ka qayb qaatay xalinta dhibaatada Somaliya.
Dawlada Somaliya, waxaa afhayeen u ah oday dhaqameedyo ka soo jeeda hal beel, kuwaas oo had iyo goor shirar jaraa,iid ku qabta magaalada Muqdisho.
Waxaa magaalada Muqdisho ka jira gudi beeleed ay leedahay beesha Hawiye, oo leh qaybo badan, kuwaas oo ka awood badan dawlada. Gudi noocan oo kale ah kama jiro qaybha kale ee dalka Somaliya, hadii ay ka samaysmaana waxaa la waayi doonaa in ay dawladi ka jirto dalka Somaliya.
Gudiga beelaha Hawiye waxaa gudoomiye u ah Ibraahin Xasan Xaad oo ah Muruursade, waxaa gudoomiye ku xigeen u ah Axmed Diiriye oo ah Habar Gidir. Gudigan waxaa maalgaliya dawlada ka jirta Muqdisho waxayna leeyihiin Ideecado, wargayso iyo Telefeshino ku hadla afka dawlada iyo ka beelaha ay gudiga u yihiin.
Kolka dhab ahaan loogu fiirsado talaabooyinka ay qaadayso dawlada Somaliya waxaad ogaan in ay tahay dawlad kali talis ah. Dawladu waxay hilmaansantahay ln ay awooda ku hayaan ciidamo shisheeye oo dalka lagu keenay sugida amniga, dawladuna ay tahay dawlad dib u heshiineed.
Tusaale waxaa kuugu filan in dawlada tan iyo intii la dhisay xidhiidh la yeelan la,adahay maamul gabaleedyadii sii jiray, kuwa dhismahayna ay colaadi dhextaal, arinkaas oo ka duwan doorkii loo dhisay dawlada wadaaga ah.
Doorka dawladu wuxuu ahaa in ay dhaxfadhiisato maamulada jira oo ay la tashato kuwa dhismahayna ay dhaxjoogto oo hadii ay waxtabanayso ay u caqli celiso si ay u kasbato kalsooni iyo kal gacal.
Taa badalkeeda dawlada wadaaga ah ee Somaliya, waxay qaadatay door cusub oo ah caga juglayn iyo abaabul colaado sokeeye, iska horkeen beelaha iyo lacago ku bixin sidii ay dhibaatooyin uga abuuri lahayd degaanada nabdoon iyo kala goynta dalka Somaliya.
Waxaa kale oo ay dawlada wadaaga ah ee Somaliya ay xidhiidh hoose la samaysatay ururo mucaarad ku ah dalalka dariska oo ay ka mid yihiin OLF iyo ONLF.
Waxaa maalintii shalay ahayd lagu dilay magaalada Kismaayo labo nabad doon oo ka mid ahaa dadka odayaasha ah oo wax ka samaynayey dhismaha maamulka Jubaland. Dadka dilka gaystay waxay ka tirsanaayeen mucaaradka Ethiopia waxaana laga amrayey Muqdisho.
Sababta ay isugu xidhmayaan mucaaradka Ethiopia iyo dawlada Somaliya waa nacayb ay labadooduba u qabaan dhismaha maamulka Jubaland, iyaga oo mid waliba ka leeyahay dan degaanka Jubaland.
Ugu dambayn waxaa dhismay maamulka Jubaland, wayna socon waayeen qorshayaashii dawlada Somaliyan ku doonaysay in ay ku horistaagto dhismaha maamulka Jubaland. Talaabada xigta ee laga sugo dawlada Somaliya iyo kuwa ay is xulafaystaan waa dagaal lagu qaado maamulka Jubaland. Dagaalkaas oo qurshuhu yahay in laga dhax bilaabo magaalada Kismaayo, ka dibna ay soo galaan ciidamada dawlada ee lagu uruurinayo duleedka magaalada Marka.
Sida ay aaminsan tahay dawlada Somaliya kolka uu dagaalku bilowdo ciimada ka yimid dalka dariska ah ee Kenya way ka bixi dalka, waayo uma ayna imanin dagaal ee waxay u yimaadeen in ay sugaan nabada.
Cabdikariin Guuleed oo Ceshan Waayey Calooshiisa Waxa yaala, Iloobayna Xilka Jagada uu Hayo.